Na-egwu egwu na GNU / Linux: ụjọ obodo | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Egwuregwu
Egwuregwu egwuregwu bọọlụ dị mma na Ndokwa Anyị ahụworị ole na ole, ihe atụ ha bụ Ọbịa Arena, Mwakpo Mpaghara, Mepee Arena na ọla di okpu-eze, Egwuregwu m na-ewetara gị taa: Obodo ụjọ. Dabere na Wikipedia:
Obodo ụjọ, nke a na-akpọbiri AJT (iji zere mgbagwoju anya na UT Unreal Tournament) bụ ngụkọta ntụgharị nke egwuregwu Quake III nke mbụ onye mepụtara Silicon Ice, nke a maara ugbu a dị ka FrozenSand. Webata ihe ndị a na-akpọ Egwuregwu Pụrụ Iche na gburugburu. Egwuregwu ahụ n'onwe ya anaghị akwụ ụgwọ, mana Frozensand na-ejigide ikike, mmezigharị na-enweghị ikike ma ọ bụ ire ha anaghị ekwe, egwuregwu ahụ na-eji ioUrbanTerror engine nke dabere na ioQuake3 kesara n'okpuru ikike GNU / GPL.
Obodo ụjọ e mere ya ka a na-egwu ya na ntanetị. Nanị ụzọ anyị nwere ike igwu ma ọ bụ nwalee ya na mpaghara bụ site na ịmepụta ihe nkesa n'onwe anyị.
Ekwesịrị m ịsị na ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu maka eserese eserese ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ nweghị ezigbo ihe ọ nwere, dịka ọmụmaatụ, Mwakpo Mpaghara. M na-ekwu na nke ikpeazụ, mgbe agba egbe ya "culeteees" ya mere ọkụ n'obi nke lekwasịrị bụ ihe siri ike.
Weghara Flag (CTF): Ebumnuche bụ ijide ọkọlọtọ nke ndị na-emegide ya ma were ya gaa na ebe obibi.
Onye lanarịrị otu (TS): Kpochapu ndị egwuregwu nke otu ndị na-emegide ya, ruo mgbe ọ dịkarịa ala otu onye lanarịrị ndị otu ha ma ọ bụ oge gwụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe osise A na-ejikwa ya site na "Round" na njedebe otu ndị nwere ọtụtụ agba (Won) meriri maapụ ahụ.
Otu Deatmatch (TDM): Kpochapu ndị egwuregwu nke otu ndị na-emegide ya, ihe dị iche na Team Survivor bụ na n'ọnọdụ a, a na-amụgharị onye ọkpụkpọ ahụ. Otu a kpochapụrụ ndị kachasị asọmpi na-enweta mmeri mgbe oge ruru.
Bọmbụ Mode (bombu): Yiri Team Survivor, ya na ndiiche otu otu gha agbalite ogbunigwe na ndi iro ha ma otu ndi ozo gha egbochi nke a.
Soro onye ndu (FollowTLead): O yikwara Team Survivor. Ihe mejupụtara ya bụ na onye ndu ga-emetụ ọkọlọtọ onye iro nke nọ na ọnọdụ adịghị mma. Onye ndu na-abanye na akpaghị aka na Kevlar Vest na Helmet. Onye ndu na-agagharị.
Free maka niile (FFA): Ejighị ya egwuri egwu dika otu, ọ bụ ọnọdụ mmadụ ebe ị ga - egbu ndị egwuregwu niile. Onye meriri ya b'onye gbuchara ndị na-agba ya mgba.
Weghara Ma Jide (CapnHold) Ọ nwere ìgwè abụọ ga-eweghara ụfọdụ akara ọkọlọtọ kesara na maapụ niile. Ọ bụrụ na otu na-ewepụ ọkọlọtọ niile, ọ ga - enweta akara 5 na ihu ọma ya. Onye mmeri bu onye nwere akara kachasi elu.
Nwere ike nweta ihe egwuregwu data, ngwá agha nkọwa na ndị ọzọ na Wikipedia. Ma m hụrụ n'anya otú ọ dị, na ndịna-emeputa na m Eserese Intel® HD 4000 ọ na-aga nke ọma, yabụ zọpụtara m onwe m pụọ na egwuregwu dị mfe na ọnọdụ ịntanetị yana nke m tụrụ aro na mbụ (nke a ka ihe atụ), ugbu a, m maa amasị Obodo ụjọ 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » Na-egwu egwu na GNU / Linux: ụjọ obodo
Ezigbo edemede, Agụrụ m ha site na Thunderbird site na RSS.
Ọ ga-amasị m ịnwale egwuregwu a, laptọọpụ m nwere Intel Graphics 3000, Enwere m nkesa Fedora 20 KDE.
Achọrọ m ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala? Kedu ka m ga-esi mara ma awụnyerela ya? Ebee ka m ga-esi budata ya?
Ogbe 42 dijo
ị nwere ike ibudata ya na http://www.urbanterror.info/home/
Have nwere nhọrọ abụọ, otu ibudata mmemme na mgbe ị na-agba ya na-ebudata egwuregwu ahụ (ọ naghị akwado ya maka njikọ ịntanetị nwayọ) na nhọrọ ọzọ bụ ibudata faịlụ zip zuru oke wee jiri mmemme gara aga mee ka ọ dị ọhụrụ
PS: Amaghị m ihe kpatara ya, mana ụbọchị ole na ole saịtị ahụ adaala, ọ bụ n'ihi openssl? Mwakpo ọ bụla?
Peeji ahụ anaghị arụ ọrụ maka m, ha agbanweela ngalaba ahụ?
Achọtala weebụ ma maka ebumnuche nchekwa ọ na-agbada.
mama osisi dijo
M nwere a isi 2 duo na otu osisi Integrated, na egwuregwu bụ ezigbo mma maka m.
Echere m na m nwere ya na ndịna-emeputa nnọọ ka ọ dịkarịa ala, mana ọ dị mma
M n'ozuzu nwere banyere 70/80 fps, ma e wezụga na ụfọdụ map ndị dịtụ mgbagwoju anya
Zaghachi Marcos Hype
Isiokwu nke fps bụ ihe m na-ahụghị nke ọma, mana na mmụta mmadụ ga-ahụ naanị okpokoro 60 kwa nkeji. Ya mere, onye ọ bụla gafere 60 fps na PC ha agaghị enwe nsogbu na-egwu urt4.2. M na-emekwa ka o doo anya na ụjọ nke obodo anaghị akwado ihe karịrị 125 fps, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na egwuregwu ndị ọzọ na-enye ohere karịa fps.
Ma ọ bụ ihe dị ukwuu iji nweta 125fps ma ọ bụrụ na ị nwere ntụtụ n'elu 120-180
M na-egwu Centrino 1.73GHz, Debian 6 na Intel 915 eserese, na-agbadata ntọala eserese, n'ezie. Ọ kwesịrị zuru oke maka gị.
Zaghachi ka neoxtunt
N'ikpeazụ, mmadụ na-ekwu maka ụjọ obodo mepere emepe !!!!
could nwere ike ịrịgo ihe nkesa site na Linux na mepere emepe4.2 😛
ma daa sava anyị na-anwụ anwụ ?? 🙂
Udochukwu Fiend dijo
Egwuregwu magburu onwe ya, ana m egwu ya ọtụtụ afọ (mgbe ọ ka nọ na alfa). N'ikpeazụ, m lere anya na ntinye a raara nye ya. Site n’uzọ map iji wuli elu bụ nke kachasị mma.
A oké egwuregwu! Ejirila m awa ole na ole (ỌT MANYT MANY ỌT MANYT!!) Na-egwu egwuregwu a! 🙂
Zaghachi Leandro Brunner
Nooo .. ..m ga - akwu banyere egwuruegwu a .. ..o magburu onwe ya, m na egwu ya kemgbe ihe kariri otu afo ma o na - eri ogwu .. .. ugbu a na-arusi oru ike, enwere asọmpi na asọmpi nke usoro dị iche iche, iko mba nke enwere ike ịgbaso site na gụgharia na ndị ọzọ .. .. ..dị egwuregwu na HD na-aga n'ihu ..
Ọ bụ egwuregwu kachasị amasị m, ọ dị na gọọmentị ArchLinux obodo m ... M na-akwado ya na onye ọ bụla chọrọ nchikota zuru oke nke ụdị egwuregwu egwuregwu Quake Arena na CS ..
egwuregwu magburu onwe ya, maka ndị na-egwu ya mgbe ụfọdụ, ha ga-amata m dịka Milkman 😛
haha i bu ndi uwe ojii federal elechero nwere gi dika nwa 😛
Ezigbo ihe ederede gị Elav, m na-akwado egwuregwu ọzọ, na-emeghekwa ya na dị maka linux. Chi jiri n’ehihie.
Nwagbara 2 dijo
Egwuregwu a bụ nke kachasị mma, ụfọdụ ga-ekwere na m bụ onye ahụ na-emegide Kraịst mana ọ masịrị m karịa Counter Strike…. Maapụ na ngwa agha, ihe niile dị n’egwuregwu a dị mma, ị kwesịrị ị na-abanye ntinye http://tremulous.net/ Abụọ ndị a bụ Linux DPP kachasị amasị m.
peeji gọọmentị ibudata ya anaghị arụ ọrụ.
Red eklips nwekwara ike-n'ime akaụntụ maka a na-esote ntinye si Linux http://redeclipse.net/ , ọ dịkwa na Desura. Achọpụtara m na ọ bụ ezigbo onye na-agba ụta ịgafe oge.
Xonotic bụkwa ezigbo onye na-agba ụta http://www.xonotic.org/, dabere na nexuiz.
Dị ka ndị mepere emepe website e hacked ka ụbọchị, ebe a bụ a njikọ repo ibudata obodo ụjọ http://up.barbatos.fr/urt/ isi iyi @Barbatos__
otú e si nweta ebe nrụọrụ weebụ nke obodo mepere emepe ruo taa, ebe a bụ njikọ nke repo iji budata ụjọ obodo http://up.barbatos.fr/urt/ isi iyi @Barbatos__
Desktọpụ Linux Linux kacha mma: Machị 2014 - Nsonaazụ